Ubeka njani umfanekiso wangasemva kwiAdobe Photoshop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ungayisusa njani okanye uyibeke ngasemva ifoto kwi-Photoshop
Namhlanje I-Photoshop isivumela ukuba senze imimangaliso yokwenene ngobuhlakani obuncinci nokwazi ukusebenzisa ezinye izixhobo njengesixhobo esikhawulezayo sokhetho. Esi sixhobo khange sibekho ngonaphakade, kwaye xa uyazi ukuba usisebenzisa njani, iyasivumela ukuba senze ukhetho olukhawulezileyo lokujonga eminye imisebenzi.
Ngoko ke, Ngaphandle kokukubonisa esi sixhobo sokukhetha ngokukhawulezaSiza kukufundisa ngokususa okanye ukubeka imvelaphi kwifoto kwi-Photoshop ngokukhawuleza. Sele kumhla wayo senze isifundo apho sifundisa khona ukusetyenziswa kwezinye izixhobo, kodwa kule kugxila kuphela kwesi sixhobo sithethileyo esiya kusivumela ukuba senze umsebenzi obalaseleyo.
Ungayisusa okanye uyibeke njani indawo yangasemva kwi-Photoshop
Siza kusebenzisa isixhobo esikhethiweyo sokukhetha kwaye sihambe ukusebenzisa imifanekiso emibini onokuyikhuphela ngezantsi ukwenza isifundo, njengoko besichazile kwividiyo eyenzelwe umsitho. Ngayo, uya kuba nakho ukubona ngcono ukusetyenziswa kwesixhobo kunye namanyathelo ekufuneka elandelwe.
Sivula umfanekiso yenkunzi yegusha.
Sikhetha isixhobo sokukhetha ngokukhawuleza udibana nomlingo womlingo.
Cinezela ngaxeshanye Isitshixo sokutshintsha njengoko sicofa kwiindawo ezahlukeneyo imvelaphi yomfanekiso ukukhetha loo nxalenye.
Ngawo onke amaxesha sinako Sebenzisa isitshixo se- «Alt» endaweni yoonobumba abakhulu ukuthabatha ummandla esingafuniyo, njengoko kunokuba njalo xa uthatha inxaxheba kwinkunzi yegusha.
Sitshintsha ukhetho ngokuLawula + Shift + I ukuba nenkunzi yegusha.
Sichaza ukhetho ngesixhobo se-lasso (L): «Oonobumba abakhulu» ukongeza ukhetho kunye «alt» ukuthabatha
Siya kwilayidi leefestile, kwaye Cofa kwi «Yongeza imask vector» emazantsi.
El imvelaphi iyanyamalala phambi kwethu.
Siya eKapa kwaye sicofa kabini kwimaski.
Kwimenyu ebonakalayo, cofa kwi «Smart Radio», eziya kuthi ziqinisekise ukuba iinwele ezingasemva kwenkunzi yegusha zibonakala zichaziwe.
Sifaka ifayile ye Ipharamitha yomgama ukuya kwi-10.
Cofa ku-Kulungile kwaye sinokukhetha okungcono okwenziwe.
Ngoku sinayo Sele sisusile imvelaphi kwaye sincamathisela umfanekiso wentlango ukuyibeka ngasemva.
Sibeka umfanekiso okhutshelweyo ngasemva entlango.
Sinikela ku Lawula + T ukwandisa umfanekiso ngeqhosha lokushiya icinezelwe (ukuba nomlinganiso wecandelo xa ukwandiswa).
Siza kuba nemvelaphi yomfanekiso.
IPodemos khetha omabini amacala kwaye uchukumise amanqanaba ukuze la maleko mabini adibane ngconoNgokukodwa kumbala, ukukhanya kunye nokuthelekisa, okanye loo Photoshop yiyo enikezela la maxabiso ngokuzenzekelayo ukusuka kuMfanekiso> Ithoni ezenzekelayo / Umahluko oZenzekelayo kunye noMbala oZenzekelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Ungayisusa njani okanye uyibeke ngasemva ifoto kwi-Photoshop
"Ufundisa" njani umxhasi malunga noyilo lwegraphic
Uyifaka njani i-watermark kwi-Photoshop